Baradho Zolsky ah Baradho ku koraya bey'ad aan virus lahayn - Joornaal "Nidaamka Baradhada"
Ugu weyn Sheekada Guusha
в Sheekada Guusha
LLC "Zolskiy baradho" waxaa la aasaasay 2011, shirkadu waxay ku takhasustay kobcinta cuntada iyo baradhada abuurka ee taranka sare.
Shaqada waxaa lagu fuliyaa aagagga buuraha iyo cagaha ee Jamhuuriyadda Kabardino-Balkarian. Goobtan laguma dooran si kadis ah. Heerkulka 1000-2000 mitir oo ka sarreeya heerka badda, ficil ahaan ma jiraan wax cayayaan ah oo xambaarsan cudurrada baradhada ee fayraska keena. Astaamaha faafa ee hooseeya ee buuraha dhaadheer ayaa u oggolaanaya isticmaalka agrochemistry-ga in yar, taas oo ka dhigaysa alaabtu in badan oo deegaanka u habboon.
In ka badan 200 tan oo dalagyo ah ayaa laga soo goostay beero 5 hektar ah, oo isugu jira noocyo cusub iyo kuwo horay loo xaqiijiyay iyo isugeynta baradhada.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, khubarada shirkaddu waxay fuliyaan nadiifin saddex laab ah iyo noocyo kala duwan, goosashada waxaa lagu sameeyaa gacanta. Dalagga la goostay si taxaddar leh ayaa loo xushay oo loo qiyaasay cabbirka.
Sheybaar lagu beero minitubers-ka ayaa loo sameeyay shirkadda. Waxay ku qalabeysan tahay warshad hawo-biyood, taas oo kordhinaysa wax-soo-saarka toban laab. Sannadkii 2017, iyadoo gacan ka heleysa Wasaaradda Beeraha ee KBR, Zolsky Potato LLC ayaa bilaabay aqalka dhirta lagu koriyo oo loogu talagalay kobcinta miinooyinka yaryar.
Laga soo bilaabo 2018, "Bataatiga Zolsky" wuxuu kaqeyb qaadanayay hirgalinta mashruuc cilmiyeed iyo farsamo dhameystiran "Soosaarka baradhada abuurka tayo sare leh ee noocyada wadaniga ah ee lagu tartamo bey'ada virus-ka ka caagan ee aaga buuraha ee Jamhuuriyadda Kabardino-Balkarian Republic" (qaab dhismeedka -Barnaamij farsamo oo loogu talagalay horumarinta beeraha sanadka 2017-2025). Iyada oo ay weheliso la-hawlgalayaasha sayniska, shirkaddu waxay ka shaqeyneysaa abuurista afar nooc oo cusub oo baradho ah.
Hawlaha mudnaanta u leh shirkaddu waa inay hagaajiyaan tayada ayna kordhiyaan tirada wax soo saarka koray.
Kala duwanaansho Zhukovsky goor hore
Geesinimo Kala Duwan
Red Scarlett noocyo kala duwan
Qorshayaasha waxaa kamid ah abuuritaanka xarun abuur fara badan iyo horumarinta iskaashiga wadamada shisheeye.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxqabadka shirkadda waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah https://zsk07.ru/ ama shabakadaha bulshada https://www.instagram.com/zolskiy_kartofel/
Tags: Baradho Zolsky ahbaradho korayaKabardino-Balkaria
Astaamaha xilliga 2020. Shaqa la’aan
Gobolka Novgorod, natiijooyinka hordhaca ah ee hirgelinta howlaha mashruuca mudnaanta gobolka "Horumarinta waxsoosaarka iniinyaha baradho"
Baahida loo qabo noocyada baradhada la warshadeeyo ayaa ku sii kordhaya Hindiya
Baradhada Belarusiyaanka waxaa lagu tijaabin doonaa cimilada monsoon ee Primorye
Soo saarista baradhada ganacsiga waxaa lagu taageeri doonaa gobolka Penza
Baradhada Lithuania ayaa ka muuqata dukaamada Yukreeniyaan
MOLYANOV AGRO GROUP: Noocyo rajo leh oo baradho ah